फेवा तालमा रमाउदै पूर्वयुवराज पारस शाह भने, ‘मेरा बुवाआमा मेरा लागि भगवान हुन’ (भिडियो) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/फेवा तालमा रमाउदै पूर्वयुवराज पारस शाह भने, ‘मेरा बुवाआमा मेरा लागि भगवान हुन’ (भिडियो)
फेवा तालमा रमाउदै पूर्वयुवराज पारस शाह भने, ‘मेरा बुवाआमा मेरा लागि भगवान हुन’ (भिडियो)
पुर्व युवराज पारस शाह फेरी मस्ती मुडमा फेला परेका छन् । उनी फेरी पोखरामा युट्युवर सोनिका रोकायसंग मस्ती मुडमा देखिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सोनिकाले आफ्नो युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । सोनिकाको द सोनिका सो मा पूर्वयुवराज पारससंगको भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । जसमा सोनिका र पारस पोखराको फेवा तालमा एउटा डुंगामा देखिन्छन् ।
पारस डुंगाको पछिल्लो भागमा बसेका देखिन्छन् भने सोनिका अघिल्लो भागमा बसेर भिडियो लिइरहेकी छन् । भिडियोकै क्रममा पारसले चुरोट निकालेर सल्काउँछन् । सोनिकाले सार्वजनिक हुने भिडियोमा त्यसो नगर्न आग्ह गर्छिन । पछि पारसले आफु जस्तो छु त्यस्तै देखिन चाहेको बताएपछि सोनिकाले पनि सहमति जनाउँछिन् ।
उनले भन्छिन् तपाई जस्तो हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै स्वीकार गर्छौं । तर पारसले त्यसमा असहमति जनाएपछि सोनिकाले फेरी भन्छिन् तपाईले मलाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।
सोनिकाले पारसका बारेमा आउने गरेका समाचारका बारेमा प्रश्न गर्छिन । तपाई यस्तो राम्रो हुुनुहुन्छ तर न्युजमा पनि किन के के आउँछ ? त्यसो भन्दा पारसले पुरा जवाफ दिन्नन उनले भन्छन् न्युजमा त के के…. सोनिकाले पारससंग अन्तरवार्ता लिन चाहेको भन्छिन् तर पारसले अन्तरवार्ता दिन नचाहेको बताउँछन् । तर पनि सोनिकाले तपाईको जिवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफ्नो लागि देश, परिवार र संस्कार नै आफ्नो जिवनमा महत्व राख्ने बताउँछन् । हाम्रो संस्कारमा परिवार नै भगवान हो उनले भन्छन् ।
सोनिकाले आफु पारससंग डुंगामा निकै मस्ती गरेको बताउँछिन् । सोनिकासंग पारसले डुंगा चलाईरहेका देखिन्छन् । डुंगा चलाईरहँदा सोनिकाले तालको बिचमा देखिएको मन्दिर हो ? भनेर प्रश्न गर्छिन उनले तालबाराही मन्दिर हो भनेर जवाफ दिन्छन् ।त्यसपछिको भिडियोमा सोनिकाले पारसले आफ्नो फेसवुकमा राखेको स्टाटसका बारेमा बताउँछिन् । पारसले केही दिन अघि आफ्नो फेसवुकमा राखेको स्टाटसका बारेमा ब्याख्या गर्छिन ।
ललितपुरमा वर्षौदेखि खेर जादै लाखौ सिलिन्डर ग्यास, जमिनबाट निस्केको ग्यासमा खाना पकाउनेको भिड- हेर्नुहोस भिडियो सहित